June 17, 2020 – ျမန္မာသတင္းစံု
လိုင်းပေါ်မှာ ပျံ့နှံ့နေတဲ့ အတိတ်အကြောင်းတွေကို ဒဲ့ရှင်းလိုက်တဲ့ မယ်လိုဒီ
လိုင်းပေါ်မှာ ပျံ့နှံ့နေတဲ့ အတိတ်အကြောင်းတွေကို ဒဲ့ရှင်းလိုက်တဲ့ မယ်လိုဒီလွန်ခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းက မယ်လိုဒီနဲ့ခင်ပွန်းဖြစ်သူ ကိုသာကောင်းတို့ရဲ့အိမ်ထောင်ရေးပြတ်စဲမှုသတင်းကိုတော့ ပရိသတ်တွေလည်း သိရှိပြီး ဖြစ်မှာပါ။ ဒီသတင်းထွက်ပေါ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာ တစ်ယောက်တည်းဖြစ်သွားတဲ့မယ်လိုဒီကိုတော့ ပရိသတ်တချို့က ဖေးမအားပေးခဲ့ကြသလို မယ်လိုဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီး အပုတ်ချတဲ့သတင်းတွေလည်း လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာ ပျံ့နှံ့ခဲ့ပါတယ်။မယ်လိုဒီဘက်က စပြီးဖောက်ပြန်တဲ့သတင်းတွေအပြင် အရင်အိမ်ထောင်နဲ့ သမီးလေးတစ်ယောက်ရှိတဲ့အကြောင်း စတဲ့အပုတ်ချပြောဆိုမှုတွေ ပျံ့နှံ့လျက်ရှိပါတယ်။ ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး မယ်လိုဒီကတော့ “အကောင့်တုတွေနဲ့ pageမှာ မကောင်းတာတွေ ဝင်မရေးပါနဲ့ရှင်ကျွန်မမှာ အရင်က သား ဖြစ်ဖြစ် သမီး ဖြစ်ဖြစ် ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင် ဖုံးဖိထားလို့ရမယ်ထင်လား… ဒါကြောင့်စိတ်ကူးယဉ်အကုသိုလ်ဇာတ်လမ်းတွဲထဲမှာဘဲ စီးမြောမနေကြပါနဲ့…. အနာဂတ်မှာ ချစ်ခြင်းမေတ္တာအပြည့်နဲ့လေးစားတန်ဖိုးထား Read more
မနက် (၄) နာရီမှာ ထွက်သွားတဲ့မိဘနှစ်ပါးကြောင့် ရှိုက်ကြီးတငင် ငိုကြွေးခဲ့ရတဲ့ ယဉ်လတ်
မနက် (၄) နာရီမှာ ထွက်သွားတဲ့မိဘနှစ်ပါးကြောင့် ရှိုက်ကြီးတငင် ငိုကြွေးခဲ့ရတဲ့ ယဉ်လတ်လူတိုင်းလိုလို ငယ်စဉ်အခါမှာတော့ မိဘတွေအပြင်သွားရင် အတူတူလိုက်ချင်ကြသူတွေပါပဲ။ မလိုက်ရတဲ့အခါမှာတော့ ဝမ်းနည်းပြီးငိုမိတဲ့အတိတ်တွေ ရှိခဲ့ဖူးမှာပါ။ ဒီနေ့မှာတော့ ယဉ်လတ် တစ်ယောက် မိဘတွေခရီးသွားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး ရုတ်တရဖြစ်လာတဲ့ သူမရဲ့ ခံစားချက်တစ်ချို့ ကို ” ” မနက်‌လေးနာရီကြီး ငိုလိုက်ရတယ် ” အရင်က ဖေဖေတို့ မေမေတို့ ခရီးထွက်တဲ့အခါတိုင်း အိမ်မှာ ကျန်ခဲ့ရလည်း ဘာမှမဖြစ်ဘူး. မလိုက်ရလို့လည်း ဝမ်းမနည်းနေဘူး အိမ်မှာပဲနေချင်တာ ခုကျ အိမ်ကအထွက်လေးတင်ကို ရင်ထဲစို့တက်လာပြီး မျက်ရည်တွေကျတယ် Read more
တင္ထြန္းအိပ္ရာမွ နိုးလာသည္။ ေႏြရာသီျဖစ္သျဖင့္ ေခၽြးေတြရႊဲေနသည္။ မိမိေဘးတြင္ အိပ္ေနေသာ မိန္းမျဖစ္သူ လွမူကို ၾကည့္လိုက္သည္။ လွမူသည္ တင္ထြန္းကို ဖင္ေပးၿပီး အိပ္ေနသည္။ ဖင္လုံးႀကီးေတြသည္ ထြားလွသည္။ ထမီမွာ ေပါင္ရင္းနားအထိလန္တက္ေနသည္။ လွမူ၏အသားသည္ ျဖဴဝင္းၿပီး ေခ်ာမြတ္လွသည္။ အသက္ ၃၀ အရြယ္ဟု မထင္ရေအာင္ အသားအေရစိုျပည္သည္။ ဖင္လုံးႀကီးေသာ္လည္း လူမွာမဝ။ လွမူမွာ အရပ္ျမင့္ျမင့္ လူေကာင္ထြားထြား ႏွင့္ ႐ုပ္ရည္မွာလည္း ေခ်ာေမာေျပျပစ္လွသည္။ တင္ထြန္းမွာ ႐ုပ္မဆိုးလွ ေသာ္လည္း လူေကာင္က သိပ္မထြား။ ပိန္ပိန္ ညႇက္ညႇက္ Read more
ဒုစရိုက္သမားမ်ား ခိုလွံဳရာ ၿမိဳ႕ေလး တစ္ၿမိဳ႕တြင္ “သုခဘံု” ဟု အမည္ရွိေသာ ျခံဝန္းက်ယ္ႀကီး ရွိသည္။ ထို ျခံဝန္းက်ယ္ႀကီးထဲတြင္ ခန္းနား ႀကီးက်ယ္ေသာ တိုက္တစ္လံုး ရွိသည္။ သုခဘံု ျခံ၏ အရွင္သခင္မွာ ဦးေအာင္ျမင္။ အသက္က ၄၀ ခန္႔သာ ရွိသည္။ ခႏၶာကိုယ္ ေတာင့္တင္း သန္မာၿပီး အေျပာခ်ိဳသေလာက္ ရက္စက္ၿပီ ဆိုလွ်င္ ႏွစ္ေယာက္ မရွိ။ လူဆိုး လူမိုက္မ်ားကို လက္သပ္ေမြးကာ ဒုစရိုက္လုပ္ငန္း မွန္သမွ် လုပ္ကိုင္ရင္း ႀကီးပြါးေနသူ။ သူ၏ စီးပြါးေရးကို Read more
ပေထြးျဖစ္သူ ဦးအုန္းေက်ာ္၏ အလိုးခံခဲ့ရပုံမ်ားကို ျပန္လည္ ျမင္ေယာင္မိလာေလေတာ့သည္..။ ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္ပိုင္းက သင္းသင္းအေမက ရြာမွာ အလႉလုပ္လိုသည္ဆိုသျဖင့္ အိမ္ကို ျပန္သြားခဲ့သည္..။ အလႉကို ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမွာ လုပ္မည္ျဖစ္သျဖင့္ အေမက ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းကို သြားၿပီး စီမံ ခန႔္ခြဲေနရသည္..။ သင္းသင္း အိမ္ကိုေရာက္သြားေတာ့ မနက္ပိုင္း ျဖစ္သည္..။ ေရမိုးခ်ိဳး ၊ ထမင္းစားၿပီးေတာ့ ခရီးပန္းလာသျဖင့္ မိမိ အိပ္ခန္းထဲဝင္ၿပီး ခဏလွဲေနလိုက္သည္..။ ခရီးပန္းလာတာေရာ ၊ ထမင္းစားၿပီးခါစမို႔ေရာေၾကာင့္ သင္းသင္းမွာ ေမွးခနဲ အိပ္ေပ်ာ္သြားမိရသည္..။ အဲဒီမွာတင္ သင္းသင္းတစ္ေယာက္ အိပ္မက္ဆိုးးေတြ Read more
အလင်းရောင်ရဲ့သီချင်းအသစ်လေးနဲ့ ချစ်စရာကောင်းအောင် tik tok ကစားထားခဲ့တဲ့ မေမြင့်မိုရ်
မေမြင့်မိုရ်ကတော့ MRTV-4 ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲတစ်ခုဖြစ်တဲ့ “ပန်းနုသွေး”ဇာတ်ကားကနေ ပရိသတ်အားပေးမှုကိုစတင်ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ သူမကတော့ နောက်ပိုင်းမှာ ကျရာဇာတ်ရုပ်ကို ပီပြင်အောင်သရုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့မင်းသမီးချောလေးတစ်လက်အဖြစ် စီနီယာအနုပညာရှင်တွေနဲ့အတူ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေမှာလည်း ပါဝင်သရုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ လတ်တလောကပ်ရောဂါကြောင့်အနုပညာအလုပ်တွေကိုရပ်နားထားရတဲ့အချိန်မှာတော့ မေမြင့်မိုရ်က ပရိသတ်တွေနဲ့အဆက်အသွယ်မပြတ်အောင် tik tok ဗီဒီယိုလေးတွေကိုရိုက်ကူးပြီး သူမရဲ့လူမှုကွန်ရက်ကနေတင်ပေးလေ့ရှိပါတယ်။ လက်ရှိမှာလည်း ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်အဆိုတော်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ အလင်းရောင်ရဲ့ သီချင်းအသစ်လေးဖြစ်တဲ့ “မေ”သီချင်းလေးကို ချစ်စရာကောင်းတဲ့အမူအရာလေးတွေနဲ့ tik tok ကစားထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ။ အဆိုပါtik tok ဗီဒီယိုလေးကိုတော့ ပရိသတ်တွေကလည်း နှစ်သက်သဘောကျနေကြပါတယ်။ မေမြင့်မိုရ်ရဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့tik tokဗီဒီယိုလေးကိုတော့ ပရိသတ်ကြီးအတွက်ပြန်လည်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်…။ Source:May Myint Read more
ဘေးနားမှာအမြဲရှိနေပေးတဲ့ ငယ်သူငယ်ချင်းတွေကို ပိုင်ဆိုင်ရတာဟာ သူ့အတွက်ဆုလာဘ်တစ်ခုပါ ဆိုတဲ့ မိစန္ဒီ
ပရိသတ်ကြီးရေ အဆိုတော်မလေးမိစန္ဒီကတော့ ပရိသတ်အားပေးမှုအခိုင်အမာရရှိထားတဲ့ အဆိုတော်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။သူကတော့ သီချင်းတွေကို ကိုယ်တိုင်ရေးပြီး ကိုယ်တိုင်ဆိုလေ့ရှိပြီး သူ့ရဲ့အမိုက်စားသီချင်းတွေကလည်း လူငယ်ပရိသတ်တွေရဲ့ ပါးစပ်ဖျားမှာ ရေပန်းစားအောင်မြင်ခဲ့တာပါတယ်။ ကတော့ ပြီးခဲ့တဲ့(၁၄)ရက်နေ့ သူမရဲ့မွေးနေ့ရက်မြတ်လေးမှာ ငယ်သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ စပရိုက်တာကို ခံခဲ့ရပြီးပျော်ရွှင်ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းကို အခုလိုပဲပြောပြလာခဲ့ပါတယ်။သူမကတော့ “ ဘဝမှာ ဒီလို ပေါတောတော ငယ်သူငယ်ချင်းလေးတွေကို ပိုင်ဆိုင်ရတာဟာလဲ ဆုလာဘ်တစ်ခုပါပဲ…ခင်မင်မှုအစ သူငယ်တန်း အလယ်တန်း အထက်တန်း.. ကနေဘိုးဘွားရိပ်သာ ရောက်တဲ့အထိ အတူတူ ဆက်ပေါပေးကြပါ ချစ်သူငယ်ချင်းလေးတို့ အခုလို စပရိုက်တွေလည်း များများတိုက်ပါဦးthank you so much girls Read more
သူမလတ်တလော cover songတွေ ပြန်လည်သီဆိုနေတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ပရိသတ်တွေအားပြောပြခဲ့တဲ့ ဝိုင်းလေး
ဝိုင်းလေးကတော့ ပရိသတ်အားပေးမှုကိုအခိုင်အမာရရှိထားတဲ့ အဆိုတော်တစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူမကတော့ ငယ်ငယ်ကတည်းက အနုပညာပါရမီပါလာခဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး စန္ဒယားအတီးအဆိုနဲ့ ပြိုင်ပွဲပေါင်းများစွာမှာ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ပါတယ်။2014ခုနှစ်မှာလည်း Miss World Myanmar ပြိုင်ပွဲမှာ ပါဝင်ပြိုင်ခဲ့သလို အိမ်မက်ဆုံရာသီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲတွေမှာလည်း ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ပါတယ်။ လတ်တလောမှာတော့ဝိုင်းလေးက cover songတွေကို ပြန်လည်သီဆိုနေပြီး ယခုလိုသီဆိုရခြင်းရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကိုတော့ ဒီနေ့မှာ ပရိသတ်တွေကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။ ဝိုင်းလေးကတော့”ဝိုင်းလေး Cover Song တွေကို ပြန်ဆိုနေတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကို ဝိုင်းလေး Fans တွေ အတွက် ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။ ၁. မကြာခင် သီချင်းအသစ်တွေ ဆက်တိုက်ထွက်ဖို့ လုပ်နေပါတယ်( Read more
တေးရေးဝေကြီးနဲ့ အတူ နောက်ထပ်အဆွေးသီချင်းလေးတစ်ပုဒ်ကို ဖန်တီးနေတဲ့အကြောင်း အသိပေးလာတဲ့ နန်းဆုရတီစိုး
ပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်တော်နန်းဆုရတီစိုးကတော့ သရုပ်ဆောင် အဆိုတော်တစ်ယောက်အနေနဲ့ ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးချစ်ခင်မှုကိုရရှိထားတဲ့ သူတစ်ယောက်ပါ။ နန်းဆုကတော့ နောက်ပိုင်းမှာ သရုပ်ဆောင်အလုပ်တွေထက် အဆိုတော်တစ်ယောက်အနေနဲ့ ပရိသတ်တွေအတွက် သီချင်းကောင်းလေးတွေကို ပိုမိုဦးစားပေးဖန်တီးနေခဲ့ပါတယ်။ နန်းဆုကတော့ လတ်တလောမှာ အဆွေသီချင်းအသစ်လေးတစ်ပုဒ်ကို ထပ်မံဖန်တီးနေခဲ့တဲ့ အကြောင်းကို ပရိသတ်တွေအတွက် သတင်းကောင်းအနေနဲ့ သူ့ရဲ့ My Day ကနေ “အဆွေးလေးတစ်ပုဒ်ထပ်ပြီး”လို့ ဆိုကာ ဖော်ပြလာခဲ့ပါတယ်။ အဆွေးသီချင်းလေးထပ်ပြီးဖန်တီးနေတဲ့ အကြောင်းကို တေးရေးတေးဆို ဝေကြီးနဲ့အတူစတူရီယိုမှာတွဲရိုက်ထားတဲ့ ပုံလေးနဲ့ ဖော်ပြလာခဲ့တာဆိုတော့ သီချင်းလေးကို ဝေကြီးက ရေးစပ်ပေးထားတာများဖြစ်နေမလား။ ဝေကြီးရဲ့ အဆွေးသီချင်းဖန်တီးမှုကတော့ ပရိသတ်တွေသိရှိထားတဲ့ Read more
❝ ချစ်ခြင်းအစမုန်းခြင်းက ❞ထိုင်းရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲမှာ “ဝုန်ဝမ်”ရဲ့ နောက်ကွယ်က မြန်မာနောက်ခံအသံသရုပ်ဆောင်အ‌ဖြစ်ပါဝင်ထားတဲ့ ပိုးကြာဖြူခင်
ပိုးကြာဖြူခင်ကတော့ MTRV4 ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲတွေကနေ ပရိသတ်အားပေးမှုအခိုင်အမာရရှိထားတဲ့ သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူမကတော့ သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ပရိသတ်အားပေးမှုကို အခိုင်အမာရရှိထားတာမဟုတ်ဘဲ အဆိုတော်တစ်ယောက်အနေနဲ့ပါ ပရိသတ်တွေရဲ့ချစ်ခင်အားပေးမှုကို ပိုင်ဆိုင်ရရှိထားတာဖြစ်ပါတယ်။ သံသာမိုးသိမ့်ကတော့ လတ်တလောမှာအနုပညာအလုပ်တွေကို ဆက်တိုက်လုပ်ကိုင်နေပြီး လက်ရှိမှာလည်း အလွဲလေးတွေနဲ့ ပျော်ရွှင်ဖွယ် ဖန်စီအချစ်ဟာသဇာတ်လမ်းလေး ❝ ချစ်ခြင်းအစမုန်းခြင်းက ❞ ထိုင်းရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲမှာ “ဝုန်ဝမ်” ရဲ့ နောက်ကွယ်က မြန်မာနောက်ခံ အသံသရုပ်ဆောင်‌ဖြစ်ပါဝင်သရုပ်ဆောင်သွားထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါဇာတ်လမ်းတွဲလေးကိုတော့ အပတ်စဉ် တနင်္လာနေ့မှ သောကြာနေ့အထိ ညနေ ၅:၁၅ အချိန်တွင် (အပိုင်းသစ်) ကိုထုတ်လွှင့်ပြသပေးနေတာဖြစ်ပြီး နံနက် – ၁၁:၁၀ Read more